– दीपकराज जोशी
जीवन कसरी जिउने ? कुनै ‘म्यानुअल’ न हिजो थियो, न आज छ । न त भोलि नै हुनेछ ।
विकासको गति बढ्दो छ । विकासका साथसाथै राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या पनि बढिरहेको छ ।
मेरो गाउँमा बनेको पुलले अर्को गाउँ त जोडियो तर गाउँमै बस्ने मान्छेको मन भने जोडिएन । शहरीकरणले गाउँदेखि शहरको दूरी घटायो तर एक गाउँदेखि अर्को गाउँको दूरी झनै बढायो ।
सोसियल मिडियामा लाइक, फलो, शेयर त धरै नै भयो तर वास्तविक जीवनमा मन पराउने मान्छे कम हुँदै गए । शेयर गर्नु भनेको केयर गर्नु भन्ने कुरा फेसबूकभन्दा बाहिर आएन ।
कुनै बेला लाखौं फ्यान र फलोअर्स भएकाहरूको मलामी जाने मान्छे नभेटिएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । सायद त्यसैले भनिन्छ, तपाईंका सबै फलोअर सधैं तपाईंका फ्यान हुँदैनन् ।
नाडीमा ४ लाखको घडी लगाएर त्यहीँ हाथले ४० रुपैयाँको चाउचाउ बोकेर समाज सेवा गर्छु भनेर फोटो पोस्ट गर्नेहरूको पनि भीड धेरै नै छ । ३६४ दिन झगडैमा बिते पनि भ्यालेन्टाइन डेमा ‘म तिमी विना बाँच्न सक्दिनँ’ भनेर फोटो पोस्ट गर्ने पनि कम छैनन् । जीवनभरि नै बुवाआमालाई हेला गरेर पनि कुशे औंशीका दिनमा ह्याप्यी मदर डे भनेर फोटो अपलोड गर्न पनि धेरै नै छन् ।
सोसियल मिडियाबाट फाइदा पनि छ तर हाम्रो समाजले फाइदाभन्दा दुरुपयोग नै बढी गर्दै गयो । विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ – कतै सोसल मिडियाले हामीलाई ‘एन्टी सोसल’ त बनाएको छैन ? नभएको पैसाले नचाहिएको सामान किनेर नचिनेको मान्छेलाई आकर्षण गर्ने हाम्रो संस्कार जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म समाज अगाडि बढ्ने छैन ।
कुनै बेला आफैंले उत्पादन गर्ने सामान र तरकारी आज किनेर खाँदा कसको मन कुँडिएको छैन होला । बदाम खेती बन्द भयो तर ‘पिनट बटर’ खाने बानी बस्यो । वर्षातको पानीलाई स्याखु, छत्रीले रोक्न सकेन, तब चाइनाबाट छाता आयो ।
हजुरआमाले भुटेको आफ्नै बारीमा फलेको मकैभन्दा ‘पपकोर्न’ मिठो हुन थाल्यो । माटाको भुड्काको पानीलाई फ्रिजको पानीले विस्थापित गर्‍यो । बारीमा फल्ने ताजा फलफूलभन्दा भाटभटेनीबाट आएको एप्पल जुस, अरेन्ज जुस नै मिठो हुन थाल्यो । साउने संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति, शिवरात्री र अरू थुप्रै चाडपर्वभन्दा क्रिसमस, भ्यालेन्टाइन, हालोइन प्यारो लाग्न थाल्यो ।
अरूलाई जित्ने होडबाजीमा बिस्तारै हामी आफैंसँग हारिरहेका छौं । मेरो आफ्नो जीवनका देखाइ र भोगाइबाट यहाँसम्म आइपुग्दा ममा परिवर्तन भएका कुराहरू तपाईंको सामु राख्दैछु । जीवनलाई जिउने यी सरल तरिकाहरू अपनाउनुभयो भने खुशीको पछाडि तपाईं दौड्नु पर्दैन, खुशी तपाईंको पछि दौडेर आउनेछ ।
प्रकृति : हाम्रो साथी
प्रकृतिसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने कोसिस गर्नुहोस् । यो नभल्नू कि पृथ्वी हाम्रो विस्तारित शरीरको एक हिस्सा हो, त्यसैले पृथ्वीको हेरचाह गर्नुहोस् । आफ्नै देशमा उत्पादित सामान प्रयोग गर्नुहोस् । चाहिनेभन्दा बढी सामान नकिन्नुहोस् । सामान त्यस्तो किन्नुहोस् जो टिकाउ हुन्छ र मर्मत गर्न सकिन्छ ।
अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थ, मासु, र गुलियोजन्य खानाहरूबाट टाढा रहनुहोस् । प्राकृतिक, स्वस्थ खाना खानुहोस् । सक्नुहुन्छं भने शाकाहारी वा भिगन खाना खानुहोस् ।
हरेक दिन योग/व्यायम गर्नुहोस् । स्कुटर वा मोटरसाइकलले काम चल्छ भने गाडी नचलाउनुहोस्, साइकलले काम चल्छ भने स्कुटर वा मोटरसाइकल नचलाउनुहोस् । पैदल, साइकल वा सार्वजनिक यातायातको सहारा लिनुहोस् । तपाईंको सानो प्रयासले वातावरण सफा हुनेछ ।
सकभर होलिस्टिक तरिकाले बाँच्ने कोसिस गर्नुहोस् । छतमा बाह्रै महिना फल्ने कागती र खुर्सानी लगाउनुहोस्, कमसेकम खुर्सानी र कागतीमा त आत्मनिर्भर बन्न कोसिस गरौं ।
सकभर गरगहना र मेकअपका सामान थोरै किन्नुहोस् । बाहिरी सौन्दर्यलाई भन्दा भित्री सौन्दर्यलाई निखार्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
वातावरणमैत्री सामान प्रयोग गर्नुहोस् । सकभर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने (रिसायकल) सामान किन्नुहोस् । सबैभन्दा बढी समय आफूलाई, आफ्नो परिवार अनि समाजलाई दिनुहोस् ।
आफ्नो परिवारलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार (१६ संस्कार वा आफ्नो धर्म अनुसारको संस्कार) समाज र आफ्ना पुर्खाका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् । आफ्नो मातृभाषा (नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ्ग, मैथली, भोजपुरी, आदि) छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस् ।
फुर्सदको समयमा व्यक्तिगत सीपहरू (उदाहरणका लागि काठको काम, प्लम्बरिङ, बिजुली मर्मत, साधारण उपकरण मर्मत, वागवानी र अरू कुनै पनि सीपहरू) को विकास गर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, हाँस्न नभुल्नु होला । जति धेरै हाँस्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै बाँच्नुहुन्छ । जीवनलाई फरक ढंगले हेर्नुभयो भने जीवनलाई बुझ्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
जुन व्यक्तिको आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार सही छ र मन, वचन र कर्मले कसैलाई पनि हानि पुर्‍याएको छैन त्यस व्यक्तिलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन । आफ्नो जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईं, तपाईंको परिवार, तपाईंको समाज र वातावरणलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ र जीवन सुखी र सफल हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन : गर्नैपर्ने ...
नेकपामा कुबेलाको प्रहसन : नेतृत्वको 'मल्लयुद्ध'ले म...
जुनारमा संकट : औंसा कीराको व्यवस्थापनसँगै पुनःस्था...